Online Marg | आफ्नै दाजुभाई राजनीतिमा दुईतिर, दाई मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा, भाई दोधारे भएपछि यता न उता !
आफ्नै दाजुभाई राजनीतिमा दुईतिर, दाई मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा, भाई दोधारे भएपछि यता न उता !
काठमाडौं । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्रु हुँदैन भन्छन्, नभन्दै त्यस्तै देखिएको छ । बाबुछोरा, ज्वाई–ससुरा, सासु–बुहारी वा अन्य सम्बन्धका मानिसहरु घरमै दुइवटा राजनीतिक पार्टीमा लागेर जीवन बिताइरहेका छन् ।
राजनीतिक कारणले पारिवारिक वातावरण असहज भए पनि उनीहरुले आफ्नो कर्म गर्न छोडेका छैन । धादिङको तत्कालीन लोथर गाउँ विकास समितिमा जन्मिएका आफ्नै दाजु राजेन्द्र पाण्डे माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा छन् भने माइला भाई सुरेन्द्र पाण्डेले नयाँ पार्टीलाई साथ दिन सकेनन् । उनीहरु हिजोसम्म नेपालकै लाइनमा लागेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गरेका थिए । एमाले विभाजन भएपछि सुरेन्द्रले एमाले नै रोजे । राजेन्द्र पार्टी निर्माणको अभियानमा सक्रिय भएर लागिरहेका छन् । पाण्डेका ६ जना दाजुभाई हुन् । दाजु राजेन्द्र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने दाउमा छन् ।
उनी पार्टीको संसदीय दलका नेता हुन् । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्ठलक्ष्मी शाक्यको सरकार अल्पमतमा परेपछि पाण्डेको मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना बढेको हो । राजेन्द्र पार्टीको संसदीय दलका नेता हुन् । नेपालको पार्टीले बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । शाक्य एमाले विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा नेताहरु पुगिरहेका बेला नेपालको लाइन छोडेर एमालेमै रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री भएकी थिइन् ।
तत्कालीन एमालेका ५५ सांसद (सभामुखबाहेक) रहेकामा नयाँ पार्टीमा १० जना सांसद आएका छन् । अहिले शाक्यसँग ४५ मतमात्र छ, उनले संसदमा विश्वासको मत पाउन अब अरु ११ जना सांसद खोज्नुपर्ने हुन्छ त्यो सम्भव देखिएको छैन । उनी जसरी भए पनि विश्वासको मत पु¥याउने दाबी गर्दैै आएकी छिन् । अल्पमतमा रहे पनि उनले केही दिनअघि सरकार विस्तार गरेकी छिन् ।
सुरेन्द्र भने एमालेमै फर्किएपछि अन्योलमा परेका छन् । एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि उनलाई नपत्याउने भएकाले ‘घर न घाटको’ जस्तै भएका छन् । सुरेन्द्रले यो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चितवन–१ बाट नेकपाको साझा उम्मेदवार भएर निर्वाचन जितेका थिए । पाण्डेको गाउँ अहिले बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकामा पर्छ । सुरेन्द्र बसाई सरेर चितवन पुगेका हुन् । धादिङ र चितवन छिमेकी जिल्ला हुन् ।
सुरेन्द्र एमालेको २०७१ सालमा भएको ९ औं महाधिवेशनमा महासचिवमा र राजेन्द्र उपाध्यक्षमा पराजित भएका थिए । सुरेन्द्रले ७ मतको अन्तरले इश्वर पोखरेलसँग महासचिवमा हारे । दुवैजना पूर्वमन्त्री भइसकेका छन् । उनीहरु दुबैले २०७० सालको निर्वाचन पनि जितेका थिए । सुरेन्द्र चितवनबाट र राजेन्द्रले धादिङबाट जितेका हुन् । पञ्चायतकालबाट नै दुबैजना राजनीति गर्दै आएका छन् ।
उनीहरु राष्ट्रिय स्तरका नेताका रुपमा परिचित छन् । राजेन्द्रले संविधानसभाको २०७० को निर्वाचनमा धादिङ–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । सुरेन्द्रले चितवन–१ बाट जिते ।
अहिले राजेन्द्रको राजनीतिक सम्भावना बढदै गए पनि सुरेन्द्र भने अलिकति ओझेलमा परेका छन् । राजेन्द्र अहिले धादिङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भए । प्रष्ट विचार राख्न सक्ने र अडानमा प्रतिबद्ध रहेका राजेन्द्रले प्रदेशलाई एउटा कुशल नेतृत्व दिन सक्छन् भन्नेमा नेपालको पार्टी विश्वस्त छ ।
सर्वसाधारणको आवश्यकतालाई अड्कल गरेर सार्वजनिक शौचालय र ढुंगेधारा बनाइयोस्
माधव नेपाल अब रक्सी, चुरोटलाई नेपालमा पूरै बन्द गराउँने एजेन्डा लिएर चुनावमा जान्छन् ?
मन्त्रीज्यू जनताहरुलाई कहिलेसम्म ट्याक्सी व्यवसायीको शिकार बनाइरहने ?